मधेसमा एमालेको यही परिणाम नै ठूलो कुरा हो : महासचिव पोखरेल
प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पाँचौं बनेको छ। मंगलबार तीन वटा स्थानीय तहको नतिजा आउन बाँकी रहँदा १३६ स्थानीय तहमध्ये एमालेले १८ तहमा जितेको छ। नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राजपा नेपाल र नेकपा माओवादीले एमाले भन्दा धेरै सिट जितेका छन्। पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि आफू पहिलो हुने दावी गरेको थियो। तर उसको अनुमान किन मिलेन?
शान्ता चौधरी भन्छिन् - एकजना देखे पनि हाम्रै बनाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ
काठमाडौं : एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सभासद शान्ता चौधरी अहिले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा चुनाव प्रचार प्रसारमा छिन्। भदौ २६ गते आफ्नो घर दाङबाट प्रदेश नम्बर २ मा गएकी शान्ता शुक्रबार थाहाखबरसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दा सप्तरीमा छिन्। उनको विहानदेखि बेलुकासम्मको समय एमाले उम्मेदवारका लागि मत माग्दैमा बित्छ। बिहान ४ बजे उठ्छिन्, पूर्वयोजना अनुसार भोट माग्न मतदाताका घर-घरमा पुग्छिन्। उनी धेरैजसो थारु समुदाय बढी रहेको क्षेत्रमा गएकी छन्। पश्चिम र पूर्वको थारु समुदायको धेरै संस्कार र संस्कृति मिल्छ। तर भाषा फरक छ। त्यसका लागि नेपाली भाषा सम्पर्क भाषा बनेको छ।
२२ पटक गर्भवती भएकी राउटे युवतीको दुई सन्तान मात्र जीवित
काठमाडौं : नेपालको राउटे समुदाय जो अहिले पनि जंगलमा बसोबास गर्छ। पुर्खाले जंगलमा जीवनयापन गरेको भन्दै पराम्पराको निरन्तरतास्वरूप राउटेहरू जंगलमै बस्दै आएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार राउटेको जनसंख्या ६ सय १८ मात्र छ। यीमध्ये एक सय ४७ मात्र जंगलमा बस्दै आएका छन्। फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायका महिला जनसंख्याको आधाजस्तो संख्यामा छन्। उमेर पुगेका र विवाह भएका राउटे महिलाले बर्सेनि गर्भवती हुन्छन्। तर बच्चा भने निकै न्यून मात्र बाँच्छन्।
काठमाडौं : थकाली व्यापार व्यवसायमा नाम कमाएको समुदाय हो। नेपालका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरुमा होटल लगायतका व्यवसायमा यो समुदायले राम्रो नाम कमाएको छ। त्यही व्यवसायी समुदायकी एक महिला भने परम्परागत पेशा र व्यवसाय भन्दा भिन्न राजनीतिबाट परिचित छिन्। श्रीमाया थकाली, (५०) अहिले नेकपा एमालेकी पोलिट्व्युरो सदस्य र सांसद छिन्। परिवारका अरु सदस्यहरु राजनीतिबाट बेखबर रहेपनि उनलाई भने राजनीतिले नै तान्यो। मुस्ताङको जोमसोममा जन्मे हुर्केकी उनी पढाइको सिलसिलामा कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध भएकी थिइन्।
नेपालमा कति प्रकारका नयाँ वर्ष मनाइन्छ? थाहा पाउनुस् कुन कुन हुन्?
काठमाडौं : आज नयाँ वर्ष अर्थात वैशाख १ गते। विक्रम सम्वतको पहिलो दिनलाई नै धेरैजसो नेपालीले आफ्नो नयाँ वर्षको रुपमा मनाउँछन्। सरकारले पनि नयाँ वर्षको रुपमा वैशाख १ गतेलाई मान्यता दिँदै सार्वजनिक विदा दिएको छ। यसका अलावा मगर, नेवार, थारु, किराँत, तामाङ, शेर्पा, थकाली, गुरुङ, मुस्लिम समुदायले फरक फरक दिनलाई आफ्नो नयाँ वर्ष आरम्भको रुपमा मनाउँछन्। नेपालका कति प्रकारमा नयाँ वर्ष मनाइन्छ त?
काठमाडौं : जसै दशैं नजिकिदै जान्छ भूमिपुत्र थारु गाउँमा रौनक शुरु हुन्छ। अझ थारु समुदायका युवायुवती दशैंका लागि विशेष तयारी गर्न थाल्छन्। कला, संस्कृतिले धनि थारु जाति दशैंलाई भव्यरुपमा मनाउँछन्। दशैं भनेपछि अरु समुदायमा टीका लगाउने, टाढा रहेका आफन्तसँग भेटघाट हुने र सद्भाव साटासाट गर्ने भन्‍ने बुझिन्छ। तर थारु समुदायमा भने दशैं भनेपछि नाचगान र उत्सवको पर्व भनेर समेत बुझिन्छ।
मधुबाबुको करार जिन्दगी
जो पटक-पटक रेडियो नेपालबाट निकालिए
काठमाडौं : कालजयी लोकगीतका सर्जक गायक मधुबाबु थापाको बिहिबार ६३ वर्षको उमेरमा निधन भयो। बहुप्रतिभाका धनी थापा गायन, शब्द संकलन, लेखन, संगीत, वाद्यवादन तथा सङ्गीत संयोजन सबै विधामा उत्तिकै सक्रिय थिए। थापाको शुक्रबार अन्त्येष्टी गरिएको छ। वि.स. २०१० साल वैशाख १ गते दाङको राजपुरमा जन्मेका मधुबाबुले २ वर्षको उमेरमै दृष्टि गुमाएका थिए।
अछाममा छाउ गोठमै महिलाको मृत्यु, किन रोकिएन छाउपडी प्रथा?
९ वर्षमा गयो ८ जनाको ज्यान
काठमाडौं : अछामको तिमिल्सेन गाविसमा छाउपडी गोठमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बेलुकी ८ बजे खाना खाएर छाउगोठमा सुत्न गएकी तिमिल्सेन गाविस ७ की २६ वर्षिय डम्बरा उपाध्याय शनिवार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेकी हुन्। डम्बरा बिहान ढिलोसम्म पनि छाउगोठबाट बाहिर नआएको र जेठानीले बोलाउदा पनि ढोका नखोलेपछि गाउँलेहरु जम्मा भएर हेर्न जाँदा मृत अवस्थामा फेला परेकी अछामका निमित्त प्रहरी प्रमुख इन्सपेक्टर बद्रीप्रसाद ढकालले बताए। उनका अनुसार घरदेखि ४० फिट टाढा रहेको छाउगोठमा नाकबाट रगत बगेको र घोप्टो परेको अवस्थामा डम्बराको शव फेला परेको थियो।
काठमाडौंको त्यो बेलाको दशैं
काठमाडौं : नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य रघुजी पन्त काठमाडौंका बासिन्दा हुन्। राजनीति सँगै लेखनमा समेत सक्रिय नेता पन्तले त्यतिबेलाको दशैं सम्झिए जतिबेला काठमाडौंमा खेतिपाति प्रशस्त हुन्थ्यो र बस्ती पातलो थियो।
'पार्टी काममा यसरी डुबिएछ कि, बिहे भन्ने कुरा त मन...
मधेसमा एमालेको यही परिणाम नै ठूलो कुरा हो : महासचि...
शान्ता चौधरी भन्छिन् - एकजना देखे पनि हाम्रै बनाउन...
२२ पटक गर्भवती भएकी राउटे युवतीको दुई सन्तान मात्र...
काखमा आठ महिनाको छोरा लिएर भोट माग्न हिँडें : श्री...
नेपालमा कति प्रकारका नयाँ वर्ष मनाइन्छ? थाहा पाउनु...
नाटकमा देखाइयो सखिया नाच्ने रहर पालेकी थारु युवतीक...
अछाममा छाउ गोठमै महिलाको मृत्यु, किन रोकिएन छाउपडी...